DAAWO SAWIRO:- Dekeda magaalada Muqdisho oo xiliga habeenki ah shaqa bilaawday – SHABAKADA HIIRAAN XOG
[ 25/03/2019 ] Madaxweynaha maamulka Jubbland oo soo gaaray magaalada Muqdisho	Arimaha Bulshada
[ 25/03/2019 ] Masuul ka tirsan Jaamacada SIMAD oo Qarax loogu dilay magaalada Muqdisho	Arimaha Bulshada
[ 25/03/2019 ] Ciidamada Booliska oo xiray wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho	Arimaha Bulshada
[ 25/03/2019 ] Doorasho ka socota magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug	Arimaha Bulshada
[ 25/03/2019 ] Ciidamada Booliska oo howlagal ka sameeyay qeyba ka mid ah magaalada Muqdisho	Arimaha Bulshada
HomeArimaha BulshadaDAAWO SAWIRO:- Dekeda magaalada Muqdisho oo xiliga habeenki ah shaqa bilaawday
DAAWO SAWIRO:- Dekeda magaalada Muqdisho oo xiliga habeenki ah shaqa bilaawday
11/08/2018 Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in Dekedda Muqdisho ay shaqeyso xilli habeen ah ka dib markii dhawaan uu Madaxweyne Farmaajo Amray in si deg deg ah dekedda Habeenkii looga shaqeysiiyo.
Raiisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mahdi Maxamad Guuleed ayaa furay in Dekedda Muqdisho ay shaqeyneyso xilli habeen ah muddo ka badan 20-sano kadib.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Beyle ayaa sheegay in tilaabaddaan ay tahay mid sare u qaadeysa dhaqaallaha Soomaaliya.
Guddiga loo xilsaaray in Dekedda ay shaqeyso habeen ayaa maalmihii lasoo dhaafay lahaa kulamo joogto ah , waxaana ugu dambeyntii ay Caawa ku guuleysteen in dekedda habeen iyo maalinba ay shaqeyso.
Dagaal ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo
Magaalada Godey oo shacab Soomaaliyed hati looga dhacay loo celiyay
AKHRISO:- Gudoomiyaha Olombikada Gobolka Hiiraan ayaa Bahda Ciyaaraha Gobolka ka dalbaday in ay la shaqeyaan
Hiiraan Xog, Qoraal uu Bartiisa Facebooga kusoo qiray ayaa u qornaa Sida tan Anigoo ku hadlaya codka bahda ciyaaraha ee gobolka hiiraan. Ahna Gudoomiyaha Olombikada Gobolka Hiiraan GOGH Waxaan idin ka codsanayaa inaad igu garab [...]